Dutchtown Downtown တွင်ရှိသော UrbanMain Initiative • DutchtownSTL.org
Downtown Dutchtown ရှိ UrbanMain Initiative
UrbanMain သည် Downtown Dutchtown ၏စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကောင်းကျိုးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အစပျိုးသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်အကြားမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ် DT2 • Downtown Dutchtown, အ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်နှင့် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှုနှင့်မစ်ဆူရီ၌၎င်း၏မျိုး၏ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, DT2, အ CIDနှင့် MMSC Grand နှင့် Broadway အကြား Meramec လမ်းတစ်လျှောက်ရှိconsideredရိယာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့် Downtown Dutchtown သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်အစီအစဉ်များကိုတီထွင်မည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမစ်ဆူရီ Main Street ရဲ့အသုံးချပါလိမ့်မယ် လေးမှတ်ချဉ်းကပ်မှု: ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စီးပွားရေးအရအရေးပါမှု၊ ဒီဇိုင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေး။ UrbanMain အစီအစဉ်ဖြင့်မြို့ပြလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပဉ္စမအချက်ဖြစ်သော Safe, Clean နှင့် Green စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ကျနော်တို့ Downtown Dutchtown ခေါ်သောအနီးစပ်ဆုံးcallရိယာ။
UrbanMain Initiative ကို ဦး ဆောင်လိမ့်မည် ဦးစီးကော်မီတီ DT2 ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့နှင့် MMSC တို့နှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်နေသော Dutchtown ၏လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောဒေသခံများနှင့်ပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ လာမည့်လများနှင့်နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်မံတုံ့ပြန်ချက်များစုဆောင်းရန်နှင့်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အခွင့်အလမ်းများပေးရန်ပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများကိုကျင်းပမည်။
Main Street မှ ၄ + ၁ မှတ်ချဉ်းကပ်မှုမှ Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများသည်ကော်မတီ ၅ ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်း၊ စီးပွားရေးတက်ကြွမှု၊ မြှင့်တင်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လုံခြုံသောသန့်ရှင်းရေးနှင့်အစိမ်းရောင်ကော်မတီများသည် DT2 နှင့် Dutchtown CID ဘုတ်အဖွဲ့များသို့အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ ထိုကော်မတီများကို Dutchtown အားလုံးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရပ်ကွက်ဖြစ်လာစေရန်လုပ်ငန်းကိုလမ်းညွှန်ပြီးလုပ်ဆောင်မည့်ရပ်ရွာလူထုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကော်မတီများအကြောင်းပိုမိုသိရှိပြီးအသင်းဝင်နိုင်ပါပြီ Dutchtownstl.org/committees.
Urban Main အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် DT2 နှင့် Dutchtown CID တို့သည်aကိုငှားရမ်းခဲ့ကြသည် Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာ။ ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာသည်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့်မစ်ဆူရီ Main Street ၏အချက်လေးချက်ပါသောချဉ်းကပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာ Jessica Payne နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် jessica@dutchtownstl.org.
ဒိန်းမတ် Downtown Dutchtown ရှိ UrbanMain Initiative